K-Pop ပရိသတ်တွေကို ဒီလိုစကားမျိုးတွေလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့… – Trend.com.mm
K-Pop ပရိသတ်တွေကို ဒီလိုစကားမျိုးတွေလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့…
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုရီးယားသီချင်းတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ကိုပျံ့နှံ့ရေပန်းစားလာကြပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ K-Pop ပရိသတ်တွေကလည်းမနည်းမနောပါပဲ။ပြီးတော့ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုသလို သင့်အနေနဲ့ K-Pop ပရိသတ်တစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်ပြီဆိုရင် ရောယောင်ပြီးတောင် မပြောသင့်တဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါက ဘာတွေလဲဆိုတော့…
*ကိုရီးယားတွေကိုသိတောင်မသိ မမြင်ဖူးပဲ ဘာလို့ကေပေါ့ပ်သီချင်းတွေနားထောင်နေတာလဲ?
ဒီစကားကို တကယ့်ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်စစ်စစ်တစ်ယောက်ကိုသွားပြောမယ်ဆိုရင် အခင်မင်ပျက်သွားတော့မှာအသေအချာပါပဲ ။လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိလည်း မမြင်ဖူးလည်း အားပေးတယ်ဆိုတာ ခံစားချက်နဲ့နားထောင်ပြီး အားပေးတာပါ။ဒီတော့ သင်ဒီစကားကိုတော့ လုံးဝလုံးဝ မပြောမိပါစေနဲ့။
*သူ့ကိုကြည့်ရတာ မိန်းကလေးကျနေတာပဲ/ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ယောက်ျားလေးနဲ့တူတယ်
ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ သူတို့ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်မင်းသမီးကို ဒီလိုသွားပြောရင် စိတ်ဆိုးကြမှာပါ။တစ်ချို့သော ယောက်ျားလေးအဆိုတော်တွေဟာချောလွန်းလို့ မိန်းကလေးအလားထင်မှတ်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့က သူတို့အလုပ်ကိုအမြဲအာရုံစိုက်ပြီးကြိုးစားကြတာ အခုအောင်မြင်နေတဲ့ BTS တို့ EXO တို့ကိုကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။ကိုယ်မကြိုက်ရင်တောင် သူတစ်ပါးရဲ့အကြိုက်ကို လေးစားသင့်ပါတယ်။
ကဲ ဒီစကားကိုပြောမိရင် အားလုံးက ကန့်ကွက်ကြမှာပါ။ကိုယ်မြင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့အလှလား ၊တကယ့်သဘာဝအလှလားဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။တကယ့်အလှစစ်နဲ့လှတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အများစုက ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုလုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ်မမြင်နိုင် သေချာမသိနိုင်တဲ့စကားကိုမပြောတာအကောင်းဆုံးပါ။
ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေကသူတို့ ချစ်တဲ့အိုင်ဒေါလ်ရဲ့ အခွေတွေဝယ်တယ်။ပုံတွေဝယ်တယ်။သူတို့အတွက်ဒီကနေ မွေးနေ့ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်။တစ်ချို့ဆို ကိုရီးယားထိလက်ဆောင်ရောက်အောင်ပို့ပေးကြတယ်။ဒါကို တစ်ခြားသူတွေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံဖြုန်းတယ်လို့ မြင်လို့မရပါဘူး။သူလည်းသူချစ်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ပေးဆပ်ထားသလို ကိုယ့်မှာလည်းတစ်ခြားတန်ဖိုးထားစရာရှိတယ်မဟုတ်လား။အကြိုက်ချင်းမတူတာနဲ့တစ်ခြားသူဟာက တန်ဖိုးမဲ့တယ်ပြောလို့မရပါဘူး။
*သူတို့ရုပ်တွေက တစ်ပုံစံတည်းပဲ ဘာမှမထူးဘူး
ဒါကတော့ သီချင်းဆိုရင် တူညီဝတ်စုံဝတ်တာ၊အကကတာ တူညီတာတွေကြောင့် ရုပ်ချင်းဆင်တယ်၊ရုပ်တွေကတစ်ပုံစံတည်းပဲရယ်လို့ထင်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ အတိအကျတူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အွန်လိုင်းကနေ သီချင်းတွေဒေါင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့အိုင်ဒေါလ်အတွက် သူတို့က အမြဲပံ့ပိုးပေးချင်ကြတာပါ။ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေကသူတို့အိုင်ဒေါလ်အတွက် အများကြီးလုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိကြပါတယ်။အယ်လ်ဘမ်ဝယ်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက်ဖော်ပြကြတာပါ။ဒါကြောင့် kpoper လေးတွေကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။အယ်လ်ဘမ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ချို့နာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖွဲ့တွေက ပို့စကတ်လေးတွေ၊ဓာတ်ပုံစာအုပ်လေးတွေပါ လက်ဆောင်ထည့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
*သူတို့က Gay တွေလား
တစ်ခါတစ်လေ ယောက်ျားလေးအဆိုတော်အချင်းချင်းပွေ့ဖက်တာ၊စနောက်ကျီစယ်တာမျိုး မြင်တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကို မြင်တာနဲ့ Gay လို့ပြောလို့မရပါဘူး။သူတို့က ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုပြီးမဟုတ်ပဲ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အပေါ်နွေးထွေးမှုကိုပြသတာပါ။ဒါကို ပရိသတ်မဟုတ်ရင် မြင်ကြည့်လို့မရပါဘူး။ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်မဟုတ်တဲ့သူကိုလည်း အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။ဒါက သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာပါ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အကြိုက်သူ့အကြိုက်ဆိုတာရှိလို့ ကေပေါ့ပ်အဆိုတော်တွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုး၊မကြိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း မကြိုက်ရကောင်းလားဆိုတာတွေမရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလကားနေရင်း အမြင်ကတ်နေတာမျိုး၊မုန်းနေတာမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။သူ့အကြိုက်ကိုလည်း လေးစားပေး ၊ကိုယ့်အကြိုက်ကိုလည်းနားလည်ပေးမယ်ဆို အားလုံးက ကျေနပ်စရာကြီးပါပဲ။
အခုနောကျပိုငျးမှာ ကိုရီးယားသီခငျြးတှဟော ကမ်ဘာအနှံ့ကိုပြံ့နှံ့ရပေနျးစားလာကွပါတယျ။ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးမှာ K-Pop ပရိသတျတှကေလညျးမနညျးမနောပါပဲ။ပွီးတော့ လူတဈကိုယျအကွိုကျတဈမြိုးဆိုသလို သငျ့အနနေဲ့ K-Pop ပရိသတျတဈယောကျနဲ့ခငျမငျပွီဆိုရငျ ရောယောငျပွီးတောငျ မပွောသငျ့တဲ့စကားလေးတှရှေိပါတယျ။အဲ့ဒါက ဘာတှလေဲဆိုတော့…
*ကိုရီးယားတှကေိုသိတောငျမသိ မမွငျဖူးပဲ ဘာလို့ကပေေါ့ပျသီခငျြးတှနေားထောငျနတောလဲ?
ဒီစကားကို တကယျ့ကပေေါ့ပျပရိသတျစဈစဈျတဈယောကျကိုသှားပွောမယျဆိုရငျ အခငျမငျပကျြသှားတော့မှာအသအေခြာပါပဲ ။လူတိုငျးမှာလှတျလပျစှာကွိုကျပိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မသိလညျး မမွငျဖူးလညျး အားပေးတယျဆိုတာ ခံစားခကျြနဲ့နားထောငျပွီး အားပေးတာပါ။ဒီတော့ သငျဒီစကားကိုတော့ လုံးဝလုံးဝ မပွောမိပါစနေဲ့။
*သူ့ကိုကွညျ့ရတာ မိနျးကလေးကနြတောပဲ/ သူ့ကိုကွညျ့ရတာ ယောကျြားလေးနဲ့တူတယျ
ကပေေါ့ပျပရိသတျတှရှေမှေ့ာ သူတို့ကွိုကျတဲ့အဆိုတျောမငျးသမီးကို ဒီလိုသှားပွောရငျ စိတျဆိုးကွမှာပါ။တဈခြို့သော ယောကျြားလေးအဆိုတျောတှဟောခြောလှနျးလို့ မိနျးကလေးအလားထငျမှတျရတာပါ။ဒါပမေဲ့သူတို့က သူတို့အလုပျကိုအမွဲအာရုံစိုကျပွီးကွိုးစားကွတာ အခုအောငျမွငျနတေဲ့ BTS တို့ EXO တို့ကိုကွညျ့ရငျသိသာပါတယျ။ကိုယျမကွိုကျရငျတောငျ သူတဈပါးရဲ့အကွိုကျကို လေးစားသငျ့ပါတယျ။
ကဲ ဒီစကားကိုပွောမိရငျ အားလုံးက ကနျ့ကှကျကွမှာပါ။ကိုယျမွငျတာမဟုတျတဲ့အတှကျ သူတို့ခှဲစိတျပွုပွငျထားတဲ့အလှလား ၊တကယျ့သဘာဝအလှလားဆိုတာ မသိနိုငျပါဘူး။တကယျ့အလှစဈနဲ့လှတဲ့သူတှလေညျးရှိကွပါတယျ။အမြားစုက ခှဲစိတျပွုပွငျမှုလုပျထားတယျဆိုပမေဲ့အားလုံးတော့ မဟုတျပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ကိုယျမမွငျနိုငျ သခြောမသိနိုငျတဲ့စကားကိုမပွောတာအကောငျးဆုံးပါ။
ကပေေါ့ပျပရိသတျတှကေသူတို့ ခဈြတဲ့အိုငျဒေါလျရဲ့ အခှတှေဝေယျတယျ။ပုံတှဝေယျတယျ။သူတို့အတှကျဒီကနေ မှေးနပှေဲ့တှလေုပျပေးတယျ။တဈခြို့ဆို ကိုရီးယားထိလကျဆောငျရောကျအောငျပို့ပေးကွတယျ။ဒါကို တဈခွားသူတှအေနနေဲ့ ပိုကျဆံဖွုနျးတယျလို့ မွငျလို့မရပါဘူး။သူလညျးသူခဈြတဲ့အရာတဈခုအတှကျပေးဆပျထားသလို ကိုယျ့မှာလညျးတဈခွားတနျဖိုးထားစရာရှိတယျမဟုတျလား။အကွိုကျခငျြးမတူတာနဲ့တဈခွားသူဟာက တနျဖိုးမဲ့တယျပွောလို့မရပါဘူး။
*သူတို့ရုပျတှကေ တဈပုံစံတညျးပဲ ဘာမှမထူးဘူး
ဒါကတော့ သီခငျြးဆိုရငျ တူညီဝတျစုံဝတျတာ၊အကကတာ တူညီတာတှကွေောငျ့ ရုပျခငျြးဆငျတယျ၊ရုပျတှကေတဈပုံစံတညျးပဲရယျလို့ထငျကွတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ အတိအကတြူနတောမြိုးတော့မဟုတျပါဘူး။
အှနျလိုငျးကနေ သီခငျြးတှဒေေါငျးလို့ရတယျဆိုပမေဲ့ သူတို့အိုငျဒေါလျအတှကျ သူတို့က အမွဲပံ့ပိုးပေးခငျြကွတာပါ။ကပေေါ့ပျပရိသတျတှကေသူတို့အိုငျဒေါလျအတှကျ အမြားကွီးလုပျပေးခငျြတဲ့စိတျတှရှေိကွပါတယျ။အယျလျဘမျဝယျတယျဆိုတာလညျးသူတို့စိတျကို တတျနိုငျသလောကျဖျောပွကွတာပါ။ဒါကွောငျ့ kpoper လေးတှကေို အပွဈမတငျပါနဲ့။အယျလျဘမျဆိုပမေဲ့ တဈခြို့နာမညျကွီးအဆိုတျောအဖှဲ့တှကေ ပို့စကတျလေးတှေ၊ဓာတျပုံစာအုပျလေးတှပေါ လကျဆောငျထညျ့ပေးလရှေိ့ပါတယျ
*သူတို့က Gay တှလေား
တဈခါတဈလေ ယောကျြားလေးအဆိုတျောအခငျြးခငျြးပှဖေ့ကျတာ၊စနောကျကြီစယျတာမြိုး မွငျတှဖေူ့းပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါကို မွငျတာနဲ့ Gay လို့ပွောလို့မရပါဘူး။သူတို့က ယောကျြားလေးမိနျးကလေးဆိုပွီးမဟုတျပဲ သူတို့ရဲ့အဖှဲ့ဝငျအပျေါနှေးထှေးမှုကိုပွသတာပါ။ဒါကို ပရိသတျမဟုတျရငျ မွငျကွညျ့လို့မရပါဘူး။ကပေေါ့ပျပရိသတျမဟုတျတဲ့သူကိုလညျး အပွဈတငျလို့မရပါဘူး။ဒါက သူတို့အပျေါထားတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ပဲသကျဆိုငျတာပါ။
လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့အကွိုကျသူ့အကွိုကျဆိုတာရှိလို့ ကပေေါ့ပျအဆိုတျောတှကေိုကွိုကျတဲ့သူတှကေို ဝဖေနျပွဈတငျတာမြိုး၊မကွိုကျတဲ့သူတှကေိုလညျး မကွိုကျရကောငျးလားဆိုတာတှမေရှိတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အလကားနရေငျး အမွငျကတျနတောမြိုး၊မုနျးနတောမြိုးက မဖွဈသငျ့ဘူးလေ။သူ့အကွိုကျကိုလညျး လေးစားပေး ၊ကိုယျ့အကွိုကျကိုလညျးနားလညျပေးမယျဆို အားလုံးက ကနြေပျစရာကွီးပါပဲ။
Joon Ji Hoon ရဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဇာတ်ကား ”Item” Trailer ကြည့်ပြီးပြီလား